FA-005 Black Fajas- Uwe Uwe Waist Slimming Girdles maka Ụmụ nwanyị
● 78% naịlọn, 22% Spandex.
● nko na mmechi anya.
● Ịsa aka.
● Lelee chaatị dị ukwuu tupu ịzụrụ ihe: A na-atụ aro ya ka ị tụọ úkwù na úkwù iji chọpụta nha gị.Ọ bụrụ na ala dị arọ gaa dabere na nha úkwù gị wee gbadaa otu nha.Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ udi rektangulu ga-adabere na nha úkwù gị.Ọ na-esikwu ike n'ụbọchị ole na ole mbụ ọ na-eyi mgbe ahụ ọ ga-adaba n'ogo ahụ gị ma ka na-adaba afọ gị.
● MKWUO & MMADỤ: Tụnyere ụdị ndị ọzọ nke gbakwunyere nha ọkwa 2 faja, uwe mkpakọ anyị na-abịa na akwa dị elu nke nwere akwa abụọ.Akwa akwa dị n'èzí nwere ike mkpakọ siri ike.Uwe dị n'ime dị nnọọ nro nke nwere ike ibelata ọnya kọntaktị mgbu mgbe ịwachara ahụ.Ọ dabara adaba ma ọ bụghị iru ala, oke mmegharị ahụ dị mfe ma dị mma, ị gaghị enwe mmetụta nke mmachi ma ọ bụ kpachichi mgbe ị na-eyi uwe a.
● Nhazi nkọwa nke ọma: Onye na-akpụ ahụ a nwere nko atọ na-anọchi anya ọkwa mkpakọ atọ nke mkpakọ, ọ dịghị mkpa ka ịzụrụ obere nha mgbe ịchọrọ ịgbatị ya.Eriri ubu na-agbanwe agbanwe nwere ike gbanwee ogologo nke uwe ahụ dịka ịdị elu gị si dị.Ọ dabara nke ọma ọbụna maka ndị toro ogologo.Ị gaghị mmiri faja ma ọ bụ wepụ ihe niile n'ihi na oghere dị n'okpuru ebe a na-eji ụlọ mposi buru ibu.
● Ịwa ahụ BRA SHAPEWEAR: Ngwaahịa anyị ka nwere eriri 3 n'ime obi, nke adịghị na ụdị ndị ọzọ.Ọ nwere ike mkpakọ siri ike ma nwee ike ijide obi gị.bra ya mgbe ịwa ahụ gasịrị na-enye nkwado na-achụghị nkasi obi.Ịnwekwara ike iji ya dị ka bra ka emechara ya.
● OGE: Mkpakọ anyị faja gbakwunyere nha dịkwa mma dị ka: uwe mkpakọ liposuction, eriri afọ ma ọ bụ mgbe amuchara nwa, uwe BBL faja mgbe a wachara ya, eriri csection, eriri afọ postpartum maka ụmụ nwanyị, onye na-akpụ lipo, na / ma ọ bụ eriri afọ mgbe afọ gasịrị.
Nke gara aga: FA-005 Beige Fajas- Uwe Uwe Waist Slimming Girdles maka Ụmụ nwanyị
Osote: FA-006 beige Fajas-Uwe mkpakọ ịwa ahụ maka ụmụ nwanyị